Inona no haka mpianatra amin'ny fialantsasatry ny fararano? Azo antoka fa zavatra mahaliana, mahasoa ary mahafinaritra! Noraisinay ny boky sy ny lalao ao amin'ny trano famoahana MYTH, izay tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fararano matevina. Tantara mikasika ny Detective Pierre, tantara an-tariby, lalao lalao sy piozila - anao ny safidy!
Boky momba ny Detective Pierre
Ny ankizy dia tia tantara an-tsehatra, mamaha olana, manangana hevitra ary mandresy ny ratsy. Boky momba ny Detective Pierre - amin'ity andiany ity. Ao amin'ny pejy tsirairay dia misy andraikitra amin'ny fisainana (mba hahitana ny antsipiriany amin'ny zavatra kely) ary ny logic (mamaritra labyrinth).
Mitady labiera nangalarina
Ao amin'ny boky voalohany dia 15 miova, ny tsirairay amin'izy ireo - ny labiera sarotra sy ny seza kanto samihafa. Ao amin'ny pejy iray dia hahita ampolony, zavatra an-jatony! Azo jerena tsy misy farany ny fanoharana. Sary maneho amin'ny antsipiriany, fiaraha-miasa tsara - natao tamin'ny studio studio IC4Design. Jereo ny turn: sary mahaliana sy sarotra!
Fiatoana ao amin'ny Tilikambon'i Mazes
Ny ampahany faharoa amin'ny zava-niainan'i Detective Pierre dia ny fitohizan'ny lojika voalohany. Ireo mahery fo, ireo fanoharana tena mahafinaritra, ireo labyrintana izay mahavariana kokoa. Amin'izao fotoana izao ireo mpamaky dia nanampy misiônera tompon'andraikitra: hanakorontanana ny drafitra manorisory an'i Mr. X, izay te-hanangona ny tanàna ho haizina sy hamotika ny Noely!
Ny fitiavana manokana ho an'ny ankizy dia ny sticker - boky miaraka amin'ny stickers. Mazava ho azy, misy ny asa any, ary labyrinth-marika - tsy misy na aiza na aiza! Ary 800 stickers izay ahafahanao mamorona ny tantaranao manokana ary manamboatra ny fanananao manokana mihitsy aza.
Detective Pierre vao haingana no nanana ny klioba fananany. Ny tranokala "Labyrinth" miaraka amin'ny trano famoahana MIF dia nanangana ny sekolin'i Detective Pierre. Ny ankizy dia mianatra ny fahendren'ireo asa fanaraha-maso ary milalao zava-mahadomelina marina!
Ny mpanoratra tantara mampientam-po an'i Martin Sodomka dia nahatonga ny karazany ho an'ny zavaboariny. Famaritana ara-mekanika (na ara-teknika) - ny valin'ny fanontaniana hoe: "Ahoana ary ny zavatra vita?" Sarotra ny milaza momba ny fitaovana, ohatra, ny milina iray. Hazavao hoe inona ny fihenan-tseranana, ny fitaovam-pifandraisana, ny fiakaran'ny setroka - na dia sarotra kokoa aza! Saingy i Sodomka dia nahavita namorona tantara tsy nampoizina, fa ny ankizy koa dia mampihomehy! Fantaro ireo rafitra mafonja manampy ny totozy Arnie, ilay tsintsina Bill sy ny kristiana sahona, satria tantara an-tsoratra izany!
Fomba entina manangona fiara
Tao amin'ny tantara voalohany, te-hamory fiara ireo mahery fo! Mazava ho azy fa niatrika ny fahasarotana narahin'izy ireo tamin'ny hatsikana, ny fisakaizana ary ny fitadiavana vahaolana! Ny ankizy, rehefa avy namaky an'io tantara io, dia nianatra ny fiasan'ny fiara ary inona no asa tsara kokoa tokony hatao.
Fomba entina manangona fiaramanidina
Ny sary amin'ny alàlan'ny boky dia noforonin'ilay mpanoratra Martin Sodomka. Maneho hatsaram-panahy sy fahatsorana amin'ny endriny izy. Mijery ny taolan'ny fiaramanidina ianao, ary toa tsy sarotra mihitsy izany!
Ireo mpamaky vitsivitsy rehefa avy namaky tantara masin'ny mekanika ary namorona ny seho nataony.
Ahoana ny fomba hanangonana moto
Tahaka ny hoe rehefa vita ny fiara sy ny fiaramanidina dia tokony ho mora ny mamorona moto! Tsy teo ilay izy! Matetika ny mpifankatia no nifamaly, fa nifarana ny zava-drehetra!
Ahoana no hananganana trano?
Ao anatin'ity ampahany amin'ny totozy Arnie ity dia nanapa-kevitra ny hanambady ny naman'i Lucy. Fianakaviana vaovao iray dia mila trano, ary ny namana dia miala amin'ny raharahambarotra! Ankoatra ny fananganana trano, dia tsy maintsy mamaha olana maro ianao: maminavina, manomana dokam-barotra, mameno tsara ny fototra ... Amin'ny ankapobeny, na dia singam-bolo iray aza izany, saingy miady mafy ireo tena mahery!
Lalao ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Ao anatin'ity famoriam-bola ity dia nahitana lalao, satria mahaliana toy ny boky! Ary afaka milalao miaraka amin'ny fianakaviana manontolo ianao.
Indray mandeha any anaty ala maizina
"Indray mandeha any anaty ala maizina" dia mampianatra ny hieritreritra lalindalina izy, mampivelatra ny eritreritra sy ny làlan-tsainy. Ny lalao dia natsangana tamin'ny teknikan'ny tantara, izany hoe, "tantaram-piainana." Ny voalohany dia iray: "Indray mandeha any anaty ala maizina ..." Ary avy eo, ahoana no hilazan'ny fantasy! Ary sary momba ny piozila, izay azo alaina amin'ny fepetra rehetra.
Etsy ankilany, ny Halloween ihany dia mianjera amin'ny fialantsasatra. Ny lalao dia mahafinaritra ho an'io andro io mba hifalifaliana ao an-trano miaraka amin'ny fianakavianao!
Sary. Ny Big Exhibition
Ny karatra dia ahitana karatra 54 sy bokikely. Voalohany dia mila mamaky ilay boky ianao. Avy amin'izany, ny ankizy dia mianatra momba ny mpilalao 48 avy amin'ny vanim-potoana samihafa, ny sary hosodoko, ny làlana manan-danja indrindra amin'ny loko. Avy eo dia azonao atao ny maka ny karatra ary jereo ny hoe iza no nihaino sy nahatsiaro. Ny karazana lalao dia samy hafa: ho fahatsiarovana, ho an'ny hafainganam-pandehanana, ho an'ny fahalalana ny zava-misy. Ny karatra dia mampiseho ny famokarana sary hosodoko malaza, pictograms mamaritra ny fomba, fanontaniana an-tsoratra na ny anaran'ilay mpanakanto. Aorian'ity lalao ity, tandremo tsara ny mandeha mankany amin'ny sary-tsary: ​​ny ankizy dia efa mahita ny zavakanto amin'ny fomba hafa!
Ao anatin'io andian-dahatsoratra io eo ambanin'ny lohateny hoe "Think" dia ahitana sombin-javatra roa samihafa.
Ao amin'ny ampahany voalohany, dia mifantoka amin'ny fampivoarana ny saina, fahatsiarovana, fisainana ara-tsaina sy lojika. Ao anatin'ny fananganana asa 560 - avy amin'ny tsotra mankany amin'ny fanamboarana. Any am-parany, misy ny valin'ny fanamarinana. Ny famolavolana ilay boky dia mamiratra, mahaliana. Ny fanoharana dia manentana ny vahaolana amin'ny piozila, ary ny hahatakatra ny andraikitra dia hanampy ny zanak'i Plato sy Sophie, izay hiaraka amin'ny ankizy manerana ny boky.
Ny ampahany faharoa amin'ny boky "Think" dia mifantoka amin'ny fampivelarana ny fisainana mamorona. Misy piozila 150 izy io: labyrinths, asa ho an'ny fitoviana sy ny fahasamihafana, sary, lojika. Sary mampihomehy, asa mahaliana - izany rehetra izany dia hahafinaritra ny fianarana!
Fialantsasatry ny fety - fotoana iray tsy vitan'ny misoroka, fa koa mampitombo ny tombontsoan'ny zaza. Ireo boky sy lalao ireo dia hanome fehezan-teny mandaitra ary hanelingelina amin'ny fanadinana, ny fanaraha-maso ary ny andraikitry ny devoara.
Ahoana no hahatonga azy ho goth?
Fiovan'ny toetr'andro amin'ny ankizilahy
Portfolio an'ny mpianatra voalohany
Fialantsasatra any amin'ny sekoly 2013-2014
Loka ho an'ny 1 Aprily any am-pianarana
Ny hatsikana miloko mena - ny 45 modely modely ho an'ny tsirony rehetra
Sakay niverina tany an-dalantsara
Famantaranandro eo amin'ny vatan'olombelona
Rice cooked - calories
Balusters ho an'ny tohatra vita amin'ny hazo
Shade ho an'ny maso maitso
Zavina amin'ny alexandrite - sary 24 fotsy tsara tarehy miaraka amin'ny vato voajanahary sy artifisialy
Vaky ny ratra
Voajanahary voa nambolena - tombony sy ratsy
Ny tovovavy 5 taona eo amin'ny sehatry ny homamiadana dia nanambady namana tsara indrindra!
Ny vadin'ny Printsa Charles dia mety ho lasa mpanjakavavy